Ny Tononkalom-pitiavana Shiliana An-tserasera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Jolay 2017 16:21 GMT
(Marihina fa tamin'ny 20 Aprily 2007 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Iray amin'ireo fiteny iraisan'ny rehetra ny fitiavana. Pablo Neruda no iray amin'ireo poety Shiliana nanoratra tononkalo momba ny fitiavana . Nefa tsy ireo bilaogera Shiliana ihany no manana lahatsoratra misy ny tantaram-pitiavan'i Neruda ao amin'ny ADN nomerikany, fa toy izany ihany koa ireo bilaogera manerana izao tontolo izao. Ity misy santionany tamin'ny tononkalon'i Pablo Neruda izay niely manerana ny aterineto.
Nanazava tao amin'ny lahatsorany mitondra ny lohateny hoe “Ny Tononkalo Miaraka Amin'ny Feon'ny Fieritreretana” i Dantecalva hoe inona no mety vokarin'ny tononkalo :
Mbola mahafoy ahy ihany ny boky ankafiziko ao anatin'ny fotoana ratsy indrindra amin'ny tsy firaharahiana. Ny tononkalo kosa anefa dia namako hatrany ao anatin'ny tantaram-piainako iray manontolo. Nianatra ny fametrahana izany ho amin'ny toerana mendrika azy aho, izany hoe, ao anatin'ny teniko sy ny andinin-tsoratro rehetra
Olona firy eto amin'ity tontolo ity no manana fihetseham-po nateraky ny andian-teny voarindra tanteraka? Rehefa nanohina ny fanahintsika izay novinakintsika? Na rehefa avelantsika ho ao amin'ny penin'ny olon-kafa ny fihetseham-pontsika?
Ny fifantenana ny tononkalon'i Neruda izay tiany indrindra no nanohizany izany. Nandefa an-tserasera ny tononkalo “Tiako ianao” i Damian miaraka amin'ny tononkalo maro hafa amin'ny teny espaniola avy amin'ny mpanoratra hafa. Hoy izy tao amin'ny bilaoginy hoe “Tsy mampaninona raha tia ahy ianao…. Ahy ianao ao anaty nofiko. “
Ho fantatrao fa tsy tia anao aho,
ary tia anao,
toy ny fomba roa eo amin'ny fiainana,
elatry ny fahanginana ny teny,
manana ny anjarany amin'ny hatsiaka ny afo .
Tiako ianao mba hanombohako ny fitiavana anao,
mba hanombohana indray ny tsy mana-pahataperana ,
Fa tsy hoe tsy hitsahatra mihitsy ny hitia anao aho;
Izany no antony tsy mbola itiavako anao
Tiako ianao ary tsy tiako,
toy ny efa nitia aho,
eto am-pelatanako ny fanalahidin'ny fahasambarana,
ary ny anjara tsy fantatra tsy misy vintana.
Manana fiainana roa hitiavana anao ny fitiavako
Hoe nahoana no tiako ianao,
Rehefa tsy tiako anao,
Toy izany no hitiavako anao
Rehefa tiako ianao
Nandefa ny tononkalo “Poema 20″ ny bilaogy amin'ny teny Espaniola, elperiodistadigital avy tao amin'ny boky Nerudas “Veinte poemas de amor y una canción desesperada” ( ” Tononkalom-pitiavana miisa roapolo sy hiram-pahakiviana iray”). Indro ny santionany:
Afaka manoratra ny andininy mampalahelo indrindra aho amin'izao hariva izao.
Soraty, ohatra: ” Ny alina feno kintana ,
mangovitra, manga, sy ny habakabaky ny planeta, eny lavitra eny.”
Ny rivotry ny alina mihodikodina eny amin'ny lanitra sy mihira.
Afaka manoratra ny andininy mampalahelo indrindra aho anio alina.
Tiako izy ary indraindray tia ahy roa koa.
Amin'ny alina toy izao, mamihina azy amin'ny sandriko aho.
Manoroka azy imbetsaka aho eo ambanin'ny lanitra tsy manam-petra.
Tia ahy izy, ary indraindray tia azy koa aho.
Ahoana no tsy hitiavako ny masony mibaribary mangatsiaka .
Misy ny lisitry ny tononkalon'i Pablo Neruda malaza indrindra iray manontolo ao amin'ity tranonkala ity, sy ny dosie MP3 ahitana ilay poety mamaky ny tononkalony ihany koa .